व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत–नेपाली शब्दकोश कस्तो शब्दकोश हो ? (अन्तरवार्ता) | Sunaulo Nepal
सोमबार, २३ फाल्गुन २०७८
काठमाडौं । साझा प्रकाशनले व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत–नेपाली शब्दकोश प्रकाशन गरेको छ । नेपाली भाषामा प्रयोग भएका संस्कृत शब्दको व्युत्पत्तिसहितका शब्दहरु सङ्ग्रहीत शब्दकोश प्रकाशन गरेको हो ।
कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाले नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका संस्कृतका शब्दहरुको निर्माण कसरी भयो भन्ने बारेमा कोशमा उल्लेख गरेका छन् । कोशमा धातुका प्रतिनिधि रुप र शब्द गरी ३५ हजार शब्द व्युत्पादित छन् भने २ हजार पारिभाषिक शब्द छन् । अहिलेसम्म नेपाली भाषामा यस किसिमको शब्दकोश प्रकाशित भएको छैन । यसमा प्रयोग भएका संस्कृतका शब्दहरु संस्कृत वाङ्मयमा बढी प्रचलित छन् ।
केही नेपाली वाङ्मयमा पनि प्रयोग गरिएका छन् । तिनलाई देवनागरिक लिपिको परम्पारगत वार्णिक प्रणालीका क्रममा अथ्र्याइएको छ । शब्दहरुको प्रयोगस्थल निर्देश हेर्दा अधिकांश सूक्तिमय काव्यबाट लिइएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
त्यसै गरी नेपाली भाषामा पनि कतिपय यस्ता शब्द छन्, जो आगन्तुक शब्द आएपछि क्रमशः विस्थापित भए । तिनलाई क्रमशः यस्तै शब्दकोशको माध्यमबाट लिएर आउनुपर्छ । ती हाम्रै शब्द हुन् किनभने बाबुबाजेको सम्पति आफ्नै मानिन्छ । संस्कृत भनेको नेपाली भाषाको आफ्नै सम्पत्ति हो । त्यसैले संस्कृतबाट आएका ती सबै शब्द आफ्नै हुन् । कतिपय शब्दहरू प्रयोग पर्‍यौँ, कतिपय गरेका छैनौँ । फरक त्यही मात्र हो ।
मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै गएँ । सामग्री खोजेँ तर छैन । यताउति गरेर पढाउनुप¥यो । अर्को कुरा, धेरै अगि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा एक जना अमेरिकी आएका रहेछन्— आपूलाई ६ महिनाभित्र संस्कृत पढाइदिने एउटा मान्छे माग गर्दै । उनले सो अवधिमा संस्कृतको पूरा जानकारी लिने इच्छा गरेछन् । तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. तुलसी भट्टराईले मलाई लगाइदिनुभयो । तर, उसलाई केही थाहा थिएन, कुनै जानकारी नै थिएन, खाली जान्ने इच्छा मात्र थियो । फेरि भनेको कुरा बुझ्थ्यो तर उसलाई बुझाउने सामग्री भएन । मुखले भनेको भरमा जान्ने कुरा पनि भएन । त्यो विषयमा जानकारी राख्न पाए फुर्ती लाउन पाउँथ्यो उता गएर तर एकत्रित सामग्री हामीसँग भएन ।